Mukhtaar Roobow oo sheegay in uu ka tagay Al-Shabaab - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMukhtaar Roobow oo sheegay in uu ka tagay Al-Shabaab
August 15, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Abuu Mansuur oo wariyeyaasha kula hadlay gudaha Muqdisho maanta oo Talaado ah. [Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Hoggaamiyihii hore Al-Shabaab Mukhtaar Roobow oo loo yaqaan Abuu Mansuur ayaa goaansaday in uu ka tago kooxdiisii hore, waxa uu ku sheegay shir saxaafadeed uu ku qabtay Muqdisho maanta oo Talaado ah.
Shir saxaafadeedka dhexdiisa, Abu Mansuur ayaa sheegay in uu ka tagay Al-Shabaab shan sanno kahor kadib markii uu ogaaday dhibbaatooyinka guracan ee maleeshiyada.
Ugu dambeyn waxaa uu u mahadnaqay dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka sida diiran ay u soo dhaweeyeen.
Waxaa uu soo noqday hoggaamiye ku xigeenkii Al-Shabaab, sidoo kale wuxuu ahaa afhayeenkii kooxda.
Sanadkii 2013, waxa uu cararay gobolka uu kasoo jeedo ee Bakool kadib khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay isaga iyo hoggaamiyihii hore ee Al-Shabaab, Axmed Cabdi Godane, kaasoo lagu dilay duqayn diyaaradaha Mareykanka sanadkii 2014.
Kismaayo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa xilka ka qaaday wasiirkiisii amniga Cabdirashiid Xassan Cabdinuur oo loo yaqaan “Janan” kadib markii uu hehiis la galay Dowladda Federaalka Soomaaliya. Janan oo ciidamo uu wato dhowr [...]